Mpanararaotra | Janoary 2022
Maninona ny empaths sy ny mpifoka rongony no mifanintona ary miafara amin'ny fifandraisana? Ity lahatsoratra ity dia mijery lalina amin'ny antony ara-psikolojika.
Zavatra 8 tena ilaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fanararaotana narcissistic
Manontany tena ianao hoe ahoana no hahasitrana azy amin'ny fanararaotana mahery vaika? Ireto misy 8 TSY MAINTSY atao raha te handroso ianao, manasitrana amin'ny fifandraisanao ary hambinina.
Mpamitaka mpanao zava-mahadomelina daholo ve? Fa maninona no ataon'izy ireo izany? Ahoana no ahalalanao raha misy manambaka? Tokony hifanandrina amin'izy ireo ve ianao? Mamaly ireo fanontaniana ireo izahay sy ny maro hafa.
Ahoana ny fomba hifandraisana mahomby aorian'ny fifandraisana narcissistic
Sarotra aminao ve ny hifandray am-pahombiazana satria eo am-pelatanan'ny mpampindram-bola ny fifandraisan'ny mpanararaotra? Ianaro ny fomba hianarana indray ireo fahaiza-manao ireo.
Fihetseham-po 9 izay tadiavin'ireo mpanao zava-mahadomelina hamboarina amin'ireo tra-boina
Ao anatin'ny fanodinkodinam-bola sy fanararaotana ataon'izy ireo dia mitady hampahatsiaro tena zavatra sasany ireo niharam-boina. Ireto misy fahatsapana 9 tadiavin'izy ireo noforonina tao an-tsainao.
Ahoana no fomba handratrana narcissist toa azy ireo
Noho izany dia te-hamaly faty amin'ny mpahay rongony ianao. Te handratra azy ireo ianao, hanapaka azy ireo, hampijaly azy ireo. Ahoana no hahatratraranao izany raha mitahiry ny fahasalamanao manokana ianao? Ahoana no ahafahanao mamadika ny latabatra sy mampahory azy ireo? Mety tsy araka ny eritreritrao ny valiny.
Ahoana no ahafahan'ny ankizy olon-dehibe amin'ireo reny narcissistic misoroka ny fianjeran'ny fihetsem-po amin'ity Fetin'ny Reny ity
Ho an'ny ankizy manana reny mahadomelina, ny fankalazana ny fetin'ny reny dia mety ho fotoana sarotra tokoa hiatrehana ny fihetsem-po. Aza mijaly loatra, fa raiso ny sasany amin'ireny fomba fiasa ireny mba hiatrehana ireo fanamby azo ampiharina sy ara-tsaina mety hatrehinao.
Amin'ny faran'ny mafy kokoa ny karazan-java-mahadomelina dia ny mpamitaka maloto. Ireo no karazan'olona mety hanimba fiainana, ary ialana indrindra. Ireto misy famantarana 12 azonao tadiavina hanampiana anao hahita iray rehefa mihaona amin'izy ireo.
3 Zavatra ataon'ny rajako manidina (+ Ahoana no fanalana azy ireo)
Ny narcissist dia tsy manao ny loza manjo azy manokana - manangona Monkeys manidina ihany koa izy ireo handratra sy hampiasa azy ireo. Ity ny fomba fanalana fitaovam-piadiana.
Gaslighting: ohatra 22 amin'ity Mindf Manipulative Manpulative brutally * ck ity
Ireto ohatra manazava «gaslighting» ireto dia mampiseho ny fomba ampiasana azy amin'ny fifandraisana, toerana misy ny fianakaviana (ohatra: ny ray aman-dreny), na any am-piasana (oh: amin'ny sefo). Plus famantarana manokana 14 hijerena.
Maninona ianao no tsy tokony hanandrana fitsaboana amin'ny mpivady amin'ny mpitsabo mpanampy
Raha tia sy mikarakara mpampinono ianao dia mety halaim-panahy ny manandrana ny fitsaboana ny mpivady miaraka amin'izy ireo ho fomba hanatsarana ny fifandraisanareo. Aza manao. Ity no antony.
Rehefa Narcissist ny reninao
Ny tantaran'ny fahazazan'ny vehivavy iray niaraka tamin'ny renim-pianakaviana iray narcissistic, ny fomba nahafantarany ny zava-nitranga taminy, ary ny teny fanasitranana sasany ho an'ny hafa.
Ianaro ny fomba fampiasana ny Grey Rock Method hiatrehana ilay narcissist amin'ny fiainanao rehefa tsy mifandray dia tsy safidy azo tanterahina.
Teny 6 fanampiny avy amin'ny rakibolana Narcissist izay tena ilainao ho fantatra
Betsaka ny teny ampiasaina amin'ny famaritana ny lafiny fifandraisana narcissistic; ity misy 6 hahalala tsara ny tenanao.
Famantarana 6 no atrehinareo amin'ny mpahay rongony antonony (fa mpiziriziry ihany)
Ny narcissism dia aretin-karazam-borona izay midika fa misy zavatra atao hoe narcissist 'antonony'. Ireo famantarana 6 ireo dia hanampy anao hamantatra raha misy iray amin'ny fiainanao.
Ilay narcissist miafina sy ny fomba tsy ahitanao azy ireo mahitsy
Ilay narcissist miafina dia mety ho sarotra kokoa ny mahita azy indraindray, fa aza adino ny mieritreritra ny fitondran-tenany tsy dia misy poizina sy manodikodina.
Tetika mpampihorohoro 6 mampiasa ny fanoheran'izy ireo (Izay Tokony ho Fantatrao)
Raha efa niaina fanodikodinam-panafody narcissist ianao taloha, dia azonao atao ny manampy an'io andian-teny io amin'ny voambolanao mba hilazana ny zavatra niaretanao tamin'ny hafa.
Zavatra miolakolaka miisa 5 no milaza sy manao izay hiverenanao
Rehefa mieritreritra ianao fa efa nandositra nofy ratsy an-tsaina narcissist dia miatrika fika isan-karazany ampiasain'izy ireo hampidirana anao hiverina amin'ny fiainany.
Ireo saron-tava 6 an'ny narcissist (sy ny fomba hahitana azy ireo)
Ny narcissist dia mahay mametraka sarontava samihafa arakaraka ny zava-misy sy ny tanjony / tanjon'izy ireo - ireto ny 6 izay ho hitanao matetika.
Mahay mitia ve ny mpifoka rongony? Ity lahatsoratra ity dia hiady hevitra fa tsy izy ireo ary misy antony voalohany iray manakana azy ireo tsy hahatsapa izany.
hevitra ho an'ny rehefa mankaleo ianao
inona no mitranga rehefa mihetsika haingana loatra ny fiarahana
aiza no ipetrahan'i etan sy hila
ny fomba hilaza raha toa nandeha tsara ny daty voalohany